မမကို ဖွင့်တဲ့သူ…. – Grab Love Story
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဆောင်းတွင်း .။
ခြံထဲမှာ မင်းလတ် ကင်းတာဝန်ကျနေသည် ။
မင်းလတ်ဂျာကင်ကို လည်ပင်းအထိ ဇစ်ဆွဲတင်လိုက်သည် ။ သေနတ်ကို ဘယ်လက်နဲ့ ပိုက်ထားရင်း ညာလက်နဲ့ အပြာရင့်ရောင် တောဆောင်းဦးထုပ်ကို ရှေ့ကိုငိုက်ငိုက် ဆွဲချသည် ။ အိမ်ကြီးဆင်ဝင်အောက်မှာ သူရပ်နေရင်း မနေ့က ညဈေးတန်းမှာ တွေ့လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်း တွေးနေသည် ။ တော်တော်ချောတဲ့ ကောင်မလေး ။ အသားဖြူလွန်းတဲ့ အဲဒီကောင်မလေးရဲ့ ပါးပြင်လေးတွေက အေးလွန်းနေတဲ့ ရှမ်းပြည်ဆောင်းကြောင့် နီရဲတွတ်နေကြသည် ။ ပအို့မလေးလား . .ရှမ်းမလေးလား ။မနေ့ညက မင်းလတ် မြင်မြင်ချင်း ဒီကောင်မလေးကို ကြိုက်သွားသည် ။ တာဝန်နဲ့သာ မဟုတ်ရင် ကောင်မလေးနောက်ကို လိုက်မိမှာ သေချာသည် ။
မနေ့ညက မင်းလတ် မမပွင့်နဲ့ အန်တီမြတို့ ညဈေးတန်းထွက်ကြတာ လုံခြုံရေးလိုက်ရသည် ။ မာဇဒါဂျစ် အနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ မင်းလတ်သည် လမ်းဘေးမှာရောင်းနေတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ကိုင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးကို ကားပေါ်က တွေ့လိုက်တာ ဖြစ်သည် ။ ချောလွန်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ငေးနေတုံး ကားမောင်းသူ…
” ကိုကံရက မင်းလတ် အန်တီမြနဲ့ မပွင့်တို့ ဈေးတန်းထဲ လျောက်ရင်းဝေးသွားပြီ လိုက်အုံးလို့ ”
သတိပေး လို့ ကားပေါ်ကဆင်း.. အမ်၁၆ ကို ပခုံးမှာ ပြောင်းပြန်လွယ်ပြီး မမပွင့်နဲ့ အန်တီမြတို့ အနောက်ကို အပြေးကလေး လိုက်သွားရသည် ။ ခုတလော နယ်မြေအခြေအနေ သိပ်မအေးလှလို့ လုံခြုံရေးမပေါ့နဲ့လို့ မင်းလတ်တို့ကို အမြဲညွှန်ကြားထားလို့ပါဘဲ။ အင်း အဲဒီကောင်မလေးကို သူပိုးဟပ်ဖြူမလေးလို့ နံမည်ပေးထားသည် ။ စိတ်ကူးသာ ယဉ်နေတာ ဒီကောင်မလေးကို ပြန်တွေ့ပါ့မလားတော့ မသိ .။ အနောက်က ခြေသံချွတ်ကနဲ အသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ နော်ထီးမူ အိမ်ဖေါ် နော်ထီးမူပါ ။ နော်ထီးမူက မမပွင့်တို့ ရန်ကုန်က ပြောင်းလာကထဲက ပါလာတဲ့အိမ်ဖေါ်ပါ ။
“ဟေ . .ထီးမူ . .ဘာလဲ”
မမပွင့်က အကို့အတွက် ကော်ဖီ ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ . .ရော့ ”
အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ကြွေရည်သုတ် မတ်ခွက်ထဲက ကော်ဖီက အနံ့မွှေးပျံ့နသည် ။ အလွန်အေးချမ်းနေချိန် အခုလို ကော်ဖီပူပူလေး တခွက်သောက်ရတာ ဟန်ကျလိုက်တာ ။ နော်ထီးမူက အိမ်ထဲ ပြန်မဝင်သေးဘဲ မင်းလတ်အနား ပြုံးစိစိနဲ့ ရပ်နေတုံးဘဲ ။
“ဟဲ့ ထီးမူ မအေးဘူးလား . .ပြန်ဝင်တော့လေ”
“ဆွယ်တာ ဝတ်ထားပါတယ် . အကိုရဲ့ . အကိုနဲ့ စကားပြောချင်သေးလို့ပေါ့”
” အော် . .ဒေါ်နန်းဖေါင်းနဲ့ ထီးမူ မနက်ဖန် တိုးဟူးနွေး လုပ်စားမလို့ . .အကိုရော စားမယ်မဟုတ်လားဟင် ”
“ငါ ရှိရင်တော့ စားမှာပေါ့ ထီးမူ . .နက်ဖန် အဖိုးကြီးပြန်လာလို့ သူနဲ့လိုက်ရရင်တော့ ငါဘယ်စားနိုင်မလဲ”
“အန်ကယ်ကြီးက မနက်ဖန် ပြန်လာရင် ဘယ်မှ ပြန်ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး အကို ထီးမူတို့နဲ့ စားဖြစ်မှာပါ”
” အေးပါဟာ ငါကလဲ စားချင်နေတဲ့လူပါ နင်ကျွေးတာ ငါစားမယ် . .အကုန်လုံး . . ကဲ.. ဝင်တော့ အအေးမိနေအုံးမယ်”
နော်ထီးမူ အိမ်ထဲ ပြေးဝင်သွားသည် ။ နော်ထီးမူရဲ့ တင်သားတွေ တုန်ခါသွားတာ သူငေးနေမိသည် ။ ထီးမူသည် ဖင်တော်တော်ဘဲလှတာ သူသတိထားမိနေတာကြာပြီ ။ အင်း ထီးမူဖင်တွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ဒီကောင်မလေးကို သူပြစ်မှားမိနေတာကြာပြီ ။ နော်ထီးမူသည် သူ့ကို ညုတုတု အမြဲလုပ်သည် ။ ထီးမူ လာပို့သောကော်ဖီကို သောက်နေတုံး အိမ်ကြီးအပေါ်ထပ်က ချောက်ကနဲ အသံကြားလို့ မော့ကြည့်လိုက်သည် ။ အပေါ်ထပ်က ပြူတင်းပေါက်က မမပွင့် လက်ပြနေသည် ။ သူလက်ပြန်ပြသည် ။ ကော်ဖီမတ်ခွက်ကို မမပွင့်ကို ထောင်ပြလိုက်ပြီး သောက်ပြလိုက်သည် ။ မမပွင့်က ခေါင်းညှိမ့်ပြုံးပြကာ ပြူတင်းပေါက်က ခွာသွားသည် ။ မမပွင့်သည် သူ့ကို တော်တော်ခင်သည် ။ မမပွင့်သည် စိတ်သဘောထား အလွန်ကောင်းသည် ။ အဆင့်အတန်းခွဲခြားတာ လုံးဝမရှိ။ မမပွင့်သည် မင်းလတ်လို သူတို့အိမ်ကလုံခြုံရေးစောင့်တဲ့ ရဲတပ်သားလေးကို စေတနာထား ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံသည် ။
မမပွင့်ရဲ့ နံမည်အပြည့်အစုံက ပွင့်လင်းတောက်ထွန်း ဖြစ်သည် ။ ဦးတောက်ထွန်း နဲ့ ဒေါ်မြမြလင်းတို့ရဲ့ တဦးတည်းသော သမီးလေး ။ မင်းလတ် မမပွင့်အကြောင်းကို စဉ်းစားရင် ရင်တွေ တအားခုန်လာမိရသည် ။ မမပွင့်သည် အရမ်းလှသည် ။ ရုပ်တင်မက ကိုယ်လုံးလဲ အရမ်းလှသည် ။ မမပွင့် ကိုယ်လုံး ဘယ်လောက်လှလဲ မင်းလတ်အသိဆုံးပါ ။ သူများတွေသိတာက အပေါ်ယံဘဲ ။ မင်းလတ်က အတွင်းကျကျသိနေသည် ။ မမပွင့် ဘယ်လောက်တောင် လှသလဲဆိုတာ မင်းလတ် ဘယ်လို သိသလဲ .။ ခြေသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်တော့ သူနဲ့ဂျူတီ ချိန်းရန်လာနေတဲ့. ရဲတပ်သား ညွန့်သောင်း ။ ညွန့်သောင်းက မင်းလတ်လှမ်းပေးတဲ့ ကျည်ကပ်ခါးပတ်နဲ့ အမ် ၁၆ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကို လှမ်းယူသည်. ။
“မင်းလတ် . .မနက် အဖိုးကြီး ဘယ်အချိန် ပြန်ရောက်မလဲ . .မင်းသိလား”
Iနေမြင့်မှ ပြန်ရောက်မှာပါ . မင်းဂျူတီမှာ ပြန်မရောက်နိုင်ပါဘူး ညွန့်သောင်းရာ” စိတ်အေးအေးထား”
မင်းလတ် သူတို့နေတဲ့အိမ်ကြီး အနောက်ဘက်က တန်းလျားဆီကို လျောက်ခဲ့သည် ။ အင်းဒီအချိန်ဆို မမပွင့် ဘာလုပ်နေမလဲ ။ ဒါကို စဉ်းစားလိုက်တော့ မင်းလတ် ရင်တွေခုန်သွားသည်။ သွေးသားတွေ ဆူဝေလာသည်။ မင်းလတ်သည် မမပွင့် ရေချိုးရင် မမပွင့်နေတဲ့အခန်းကို အိမ်ကြီးအနောက်ဘက်က ရေစင်ကြီးပေါ်ကနေ တက်ချောင်းနေကျမို့ မမပွင့်ရဲ့ အလှအပတွေကို သူအားလုံး တွေ့မြင်ဘူးခဲ့တာပါ ။ မမပွင့်သည် ရေချိုးရင် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် ချိုးလေ့ရှိသည် ။ မမပွင့်သည် နော်ထီးမူလောက် မတောင့်ပေမဲ့ မမပွင့်ကိုယ်တွေက အချိုးကျ ကြည့်ကောင်းလှသည် ။ ဒီလိုလုပ်တာ ဒီလိုချောင်းတာ တယောက်ယောက် မြင်သွားမယ်ဆိုရင် မမပွင့်ရဲ့အဖေနဲ့ ပထမဆုံးရင်ဆိုင်မဲ့အပြင် အလုပ်လဲ ပြုတ် ထောင်လဲကျအုံးမှာဆိုတာကို မင်းလတ်သိသည် ။ မမပွင့်သည် ညဘက်ကွန်ပြူတာမှာ အင်တာနက် ဝင်ရင်လဲ ဘာညာသရကာ ဆိုက်တွေကို ဝင်တတ်တာလဲ မင်းလတ်သိသည်။ မမပွင့် တဏှာကြွလာပြီး သူမပေါင်ကြားက ပိပိကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်အာသာဖြေတာတွေကိုလဲ သူမြင်ခဲ့ဘူးတာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါဘဲ ။ မင်းလတ်သည် မမပွင့် သူမဖာသာ အာသာဖြေဖျောက်တာကို ချောင်းကြည့်ပြီး အမြဲကွင်းတိုက်သည်။
ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ မမပွင့်ကို တတ်နိုင်ရင် ပြေးသွားပြီး လိုအင်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ချင်သည် ။ ယခုလဲ မင်းလတ်သူနေတဲ့ တန်းလျားအခန်းကို ရောက်တော့ဝတ်ထားတဲ့ ယူနီဖေါင်းကို ချွတ်သည် ။ အားကစားလုပ်ရင် ဝတ်တဲ့အသားထူထူ ဘောင်းဘီခပ်ပွပွနဲ့ဖလံနယ်အင်္ကင်္ျီကို ဝတ်သည် ။ သူလုပ်နေကျ အလုပ်ကို မလုပ်ဘဲ မနေနိုင် ။ အိမ်ကြီးပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ မမပွင့်အခန်းက မီးလင်းနေသည်။ အင်း မမပွင့်တော့ အင်တာနက်ဝင်ပြီး ယောက်ျားလီးချောင်းကြီးတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်တွေ တအားထန်နေလောက်ပြီ .။ မင်းလတ်ရဲ့ ပေါင်ကြားကလီးက မမပွင့်ကို မြင်ယောင်မိနေတာနဲ့ ဖျတ်ကနဲ ခေါင်းထောင် တောင်မတ်လာလေပြီ ။ မင်းလတ်သည် မမပွင့်ကို ချောင်းရန် အရင်လိုဘဲ ရေစင်ကြီးပေါ်ကို သံလှေခါးလေးအတိုင်း တက်ခဲ့ပြီး ရေစင်ကြီးပေါ်ကနေ အိမ်ကြီးဆီကို လှမ်းကူးလိုက်သည် ။ မမပွင့်ရဲ့ အိပ်ခန်း ပြူတင်းပေါက်ရဲ့ အပြင်က အုတ်စွန်းလေးမှာရပ်ပြီး အခန်းထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ သစ်သားတရုပ်ကပ်တွေက ကောင်းကောင်းမလုံခြုံ ။ အထဲကို မြင်နေရသည် ။ အင်း . .မင်းလတ် ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ .။ မမပွင့်ဟာ စာကြည့်စားပွဲမှာ ထိုင်ရင်း ကွန်ပြူတာ မော်နီတာကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ရင်း သူမ ပေါင်ကြားထဲကို ဖိကာပွတ်နေသည် ။ မမပွင့်ရဲ့ ထမိန်ပါးလေးက ပေါင်ရင်းအထိ ဆွဲလှန်ထားတာ တွေ့ရသည် ။ မမပွင့်ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည် ဖြူဖြူသွယ်သွယ်က မီးရောင်အောက်မှာ တော်တော်လှနေသည် ။ မင်းလတ် သဲသဲမဲမဲ ချောင်းနေတုံး ပြူတင်းပေါက် ဘောင်ကိုကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်တဖက်က အရှိန်လွန်ချော်ပြီး တံခါးနဲ့ရိုက်မိသည် ။ ဘုတ်ကနဲ အသံမြည်သွားသည် ။ မမပွင့် ဖျတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည် ။ မမပွင့်ထိုင်ရာကာ ထလာသည် ။ ပြူတင်းပေါက်ဖက်ကို လျောက်လာနေပြီ ။ မင်းလတ်ရေစင်ကြီးဘက်ကို ပြန်ကူးဖို့ကြိုးစားသည် ။ မမှီတော့ ။ မမပွင့်က ပြူတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ သူ့ကို တွေ့သွားပြီ ။
“ဟင် မင်းလတ် မင်းမင်း . .ဘာလုပ်နေတာလဲ ..အော . .မင်း . .မမပွင့်ကို ချောင်းနေတာကိုး . .လာစမ်း . . အထဲဝင်ခဲ့”
မင်းလတ် ပြူတင်းပေါက်ကနေ ကျော်ဝင်လိုက်ရသည် ။ မင်းလတ်ရဲ့ လက်တွေခြေတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ရင် နေကြသည် ။ မမပွင့်က ပြူတင်းပေါက်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည် ။
“ကဲလာစမ်း . .မင်းကို မောင်လေးတယောက်လို ခင်မင်နေတာ မင်းက အခုတော့ မရိုးမသား စိတ်တွေထားပြီး မမပွင့်ကို ချောင်းနေပါလား မင်းလတ် . .မင်း . .တော်တော်ဆိုးတဲ့ချာတိတ်. .မမပွင့် ဒက်ဒီနဲ့တိုင်လိုက်ရင် မင်းဘာဖြစ်သွားမယ် ထင်လဲ . .အိုကြည့် .. စမ်းမင်းပေါင်ကြားက ဟာကြီး မာတောင်နေပါလား”
မင်းလတ် ပုဆိုးကြားက တောင်မတ်နေတဲ့ အတန်ကြီးကို မမပွင့်တွေ့သွားသည် ။ မင်းလတ် အသံမာမာနဲ့ ခေါ်လိုက်တာကြောင့် မင်းလတ် တုန်သွားသည် ။ နီရဲတွတ်နေသော မမပွင့်မျက်နှာကို သူမကြည့်ရဲ ။ ခေါင်းကြီးငုံ့ထားသည် ။
မင်းလတ် ခပ်တိုးတိုး ဖြေသည် ။
“မင်းမမပွင့်ကို ချောင်းပြီး ဒီလို ထောင်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား”
ဆိုပြီး ဇတ်ကနဲ မင်းလတ်ရဲ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်သည် ။ မင်းလတ် ဖမ်းလိုက်ချိန် မရလိုက် ။ အို . .မမပွင့် . သူ့ပုဆိုးစုတ်လေး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံကျသွားချိန် တောင်မတ်နေတဲ့ သူ့ ဒုတ်ကြီးကို မမပွင့် အနီးကပ် တွေ့သွားလေပြီ . . ။
“ဟယ် အကြီးကြီးဘဲ မင်းလတ်ရယ် . . .မမထင်ရဘူးနော်”
” ဘာဘာကိုလဲ . .ဘာကို မထင်ရတာလဲ မမပွင့်”
“အော် . .မင်းလို လူနံပိန်လေးမှာ ဒီလိုဟာကြီး ရှိနေမယ်လို့ မထင်ရဘူးလို့ ဟိဟိ”
စောစောက အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီး နီရဲတွတ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ မမပွင့်ဟာ လီးကြီးကို တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတောက်တောက်တွေနဲ့ ကြည့်ပြီး. . .ရယ်လိုက်သည် ။ မင်းလတ်ရဲ့ ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီး ထိပ်ဖျားကဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်ကြီးတပွင့်လိုဘဲ ကားကားကြီး.။ အဲဒီ မှိုပွင့်ကြီးထိပ်က အပေါက်လေးထဲက အရေကြည်တွေ စီးကျနေတာလဲ မမပွင့် တွေ့မှာပါဘဲ . ။
“မင်းကို မမပွင့်ဒက်ဒီ နဲ့ တိုင်လိုက်ရမလား .”
မမ မတိုင်ပါနဲ့ မမပွင့် . ကျနော် မှားသွားပါတယ်.. မမပွင့် ကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်”
မင်း ကို အပြစ်ပေးရမယ်”
” ဟုတ်ကဲ့ မမ ပေးပါ . .မမပေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ကို ကျနော် ခံပါမယ်”
“ကဲ.. ဒါဆိုရင် မင်းဒူးထောက်လိုက်”
မင်းလတ်လဲ မမပွင့်က ရှစ်ခိုးခိုင်းတော့မည် လို့ တထစ်ချ တွက်လိုက်ပါသည်။ မမပွင့်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လိုက်သည် ။ မမပွင့်သည် ရုတ်တရက် သူမထမိန်ကို ကွင်းလုံးပုံ ချွတ်ချလိုက်ပါသည် ။ မင်းလတ် ရုတ်တရက် ကြောင်သွားသည် ။ မမပွင့် အောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ ရှိမနေတော့ ။ ဗလာကျင်းသွားပြီ ။ မမပွင့်ရဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ ဆီးခုံကြီးက သူ့မျက်နှာနားတထွာတောင် မဝေး .။ အမွေးရိပ်ထားပုံရသည် ။ ရှင်းပြောင်ဖွေး အိနေသည် ။ အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီးကို တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ မင်းလတ်လီးက ပေါက်ကွဲမတတ် တင်းမာသွားရပြီ ။ မတ်မတ်တောင်နေသည် ။ တဆတ်ဆတ် လှုပ်လာသလိုဘဲ ။
“မင်းလတ် . .မင်းအခု အရင်လို ချောင်းစရာ မလိုတော့ဘူး . .ကဲ အနီးကပ်ကြည့်ပေတော့ . .ကြည့်ပြီးရင် မင်း . .ဘာလုပ်မလဲ”
“ကျနော် . .နမ်းနမ်းလို့ ရမလားဟင် မမပွင့်”
မင်းလတ်သည် သူ့ ရှေ့ရောက်နေသော မမပွင့်ရဲ့ ရတနာကြီးကို နှခေါင်းနဲ့ နမ်းရှုံ့လိုက်သည် ။ မမပွင့် တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။
“လူဆိုးလေး . ငကဲလေး”
မမပွင့်က မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ညုတုတုနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း မင်းလတ်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် ။ မင်းလတ်လဲ သူ့နှခေါင်းနဲ့ မမပွင့်ရဲ့ ရတနာအကွဲကြီးကို ပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ ပွတ်သပ်နမ်းနေသည် ။ မမပွင့်ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးသည် သူစမနမ်းခင်ကထဲက အရေတွေ စိုနေသည် ။ မမပွင့်က မင်းလတ်ခေါင်းကို နောက်စေ့ကနေဆွဲကာ သူမရတနာ ရွှေကြုတ်နဲ့ဖိကပ်လိုက်သည် ။ မင်းလတ်က လျာအပြားလိုက်နဲ့ မမပွင့် အကွဲကြောင်းတလျောက် အပေါ်အောက် ယက်လိုက်သည် ။
မမပွင့် မင်းလတ်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုတ်ကိုင်သည် ။မင်းလတ်လဲ မမပွင့် လက်ခံသဘောကျတာတွေ့ရလို့ အားတက်ပြီး မမပွင့်ဖင်တွေကနေ ဆွဲဖက်ကာ ဆက်ပြီး . .ယက်ပေးပါတော့သည် ။ မင်းလတ် လက်ချောင်းတွေက မမပွင့်ဖင်တွေကို ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ထားကြသည် ။ မမပွင်က ဖင်တုံးတွေက ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ ။ မင်းလတ်သည် အိပ်မက်မက်နေသလိုပါဘဲ ။ မထင်တာတွေ ဖြစ်နေပါလား ။ သူသည် သူတို့နဲ့ အဆင့်အဆန်းကွာလှသော ထိပ်တန်းလူကြီး တယောက်ရဲ့သမီးချောချာ ကောလိပ်ကျောင်းသူတယောက်ကို စောက်ပတ်ယက်လိုက် ဖင်ကြီးတွေကို စိတ်ရှိသလို ဆုတ်နယ်နေလိုက် ဖြစ်နေသည် ။
“မင်း . .မမ စောက်ပတ်ကို သိပ်ကြိုက်တာဘဲလား”
“မမ မမစောက်ပတ်ကို ယက်ရတာကြိုက်လား”
“ကြိုက်ရင်ယက်တအားယက် . . .အို . .မမလဲ ကြိုက်တယ်”
မမပွင့်သည် ဒီလောက်ထန်နေမှန်း သူမသိ ။ မမပွင့်သည် သူမနံမည်လိုဘဲ အရမ်းပွင့်လင်းနေသည် ။ မင်းလတ်ဆက်တိုက် ယက်ပေးနေတော့ မမပွင့် ဒူးတွေ ယိုင်လာသည် ။
မမပွင့်ရဲ့ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ မင်းလတ်နဲ့မမပွင့်တို့ နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်နမ်းကြပြန်သည်.။ မင်းလတ်ရဲ့ လက်တွေက မမပွင့်နို့တွေကို ဆုတ်နယ်နေကြသည် ။ မမပွင့်တကိုယ်လုံး ဗလာကျင်းနေပြီ ။ အဝတ်အစား လုံးဝမရှိနေတော့ ။ ဖြူဝင်း တောင့်တင်းတဲ့ မမပွင့်ကို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်ရနေတာ မင်းလတ်အဖို့ အိပ်မက်မက်နေသလိုပါဘဲ ။ မမပွင့်ရဲ့နို့တွေကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့ပေးနေတုံး မမပွင့်သည် သူ့လီးတန်ကြီးကို လာရောက်ဆုတ်နယ်နေပါသည် ။
“နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး . .မင်းလတ်ရယ် .အကြီးကြီး ဘဲကွာ”
“မမနဲ့ ကျနော် စစ်စတီနိုင်း ဆွဲကြမလားဟင်”
“အို . .မင်းဟာကြီးကို မမပွင့် စုတ်ပေးရမှာလား”
“အပြန်အလှန် ပုံစံပေါ့ ကျနော်က မမပွင့်ကို ယက်နေချိန် မမပွင့်က ကျနော့်ကိုစုတ်ပေးလေ . .နှစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်နက်ကောင်းတာပေါ့”
မင်းလတ်သည် လူပါးလေး ။ မမပွင့်ဆီက အဖြေမရခင်ဘဲ မမပွင့်ကိုယ်ပေါ်ကို ပြောင်းပြန် တက်ခွလိုက်ပါတော့သည် ။ မမပွင့် ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲဖြဲကိုင်ကာ မမပွင့်ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို စတင်နမ်းပေးလေပြီ ။ သည်အချိန်မှာ မမပွင့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ နီးကပ်စွာ မင်းလတ်ရဲ့လီးကြီးက ရောက်နေသည် ။ မင်းလတ်က သူ့ကိုယ်ကို လှုပ်လိုက်တော့ လီးကြီးဟာ မမပွင့်မျက်နှာကို ထိမိလေတော့သည် ။ မမပွင့်လဲ သူမလက်ကလေးနဲ့ လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ မင်းလတ်သည် မမပွင့်ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကို စယက်သည် ။ မင်းလတ်ရဲ့လျာက မမပွင့်ရဲ့ အကွဲကြောင်းအတိုင်း တပြတ်ပြတ် အသံတွေမြည်လျက် ယက်ပေးနေသည် ။ ကိုယ့်ကို ကောင်းအောင် ယက်ပေးနေတော့ . .သူ့ကိုလဲ စေတနာထားချင်လာမိသည် ။ မမပွင့် သူ့လီးဒစ်ကြီးကို ပထမလက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးတာ မင်းလတ်ကျေနပ်စွာ ခံယူနေတုံး မမပွင့်သည် သူ့လီးတန်ကြီးကို ငုံလိုက်သည် ။ အို မင်းလတ် တုန်သွားသည် ။ မမပွင့် သူ့ကို စုတ်နေပြီ ။ ဒါဟာလဲ အိပ်မက်တခုလိုဘဲ.။ သူ့လို ခြံမှာစောင့်ရတဲ့ ရဲသားလေးတယောက်ဟာ အိမ်ရှင်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးရဲ့ သမီးက လီးစုတ်ပေးတာကို ခံနေရတယ်ဆိုတာ . .ဘယ်သူယုံနိုင်မလဲ . ။ မင်းလတ်လဲ မမပွင့်ကို ဖိဖိပြီး ယက်တော့တာဘဲ ။ မမပွင့်ကို ကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူတတ်သမျှ သိသမျှနဲ့ မမပွင့်က ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို စုတ်လိုက် ယက်လိုက် လုပ်ပေးနေပေသည် ။ ပိပိနှုတ်ခမ်းသားတွေကြားကို သူ့လျာကြီးနဲ့ အပြားလိုက် ယက်ပေးနေတော့မမပွင့်ဖင်ကြီးတွေ ယမ်းခါနေကြပြီ ။ မမပွင့်လဲ သူ့လီးကြီးရဲ့ ဒစ်ဖျားကို စုတ်နေသည် .။
“အိုကောင်းလိုက်တာ မမပွင့်ရယ် ”
တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မမပွင့် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲဖြဲကာ သူ့လျာကြီးကို ထိုးသွင်းသည် ။ လျာကို မွှေ့ရမ်းပေးသည် ။ မမပွင်က ထွန့်ထွန့်လူးနေပြီ ။ မမပွင့်လဲ သူမပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့ မင်းလတ်ရဲ့လီးကြီးကို တအားနင်းစုတ်လေသည် . ။ မကြာခင်မှာဘဲ မင်းလတ်သည် အရမ်းကောင်းသထက် ကောင်းလာရပြီး ကာမလမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းတော့မည်လို့သိလာလို့ မမပွင့်ပါးစပ်ထဲက သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားလေရာ မမပွင့်က ထုတ်ခွင့်မပေးလို့ အခက်ကြုံခိုက် မမပွင့်လျာလေးက လီးတန်ကြီးရဲ့ ဒစ်ကြားကို ထိုးဆွပတ်ရစ်နေတာကြောင့် ထိန်းထားတဲ့ကြားက သုတ်တွေ တစစ်စစ် ပန်းထွက်ကုန်လေသည် ။ မမပွင့်သည် တအားဆက်ပြီး စုတ်နေဆဲ ။ သူလဲ မမပွင့်ရတနာကြီးရဲ့အစေ့ကို ပါးစပ်ထဲငုံကာ စုတ်ပေးနေမိလိုက်သည် ။ မမပွင့်လဲ တအားအား . .ဟင်းဟင်း ညည်းရင်းတွန့်လိန်နေသည် ။ မမပွင့်လဲ ကာမခရီးအဆုံးကို တက်လှမ်းသွားပုံရသည် ။
နော်ထီးမူ အစောကြီးထပြီး ဒေါ်နန်းဖေါင်းနဲ့အတူ အားလုံးစားဖို့ မနက်စာဘရိတ်ဖတ်စ် လုပ်သည် ။ ကောက်ညှင်းပေါင်း . .နှမ်းထောင်းနဲ့ တိုဟူး နှစ်ပြန်ကြော်ပေါ့ ။ ဒေါ်နန်းဖေါင်းက မင်းလတ်ကို သွားနှိုးခိုင်းသည် .။ မင်းလတ်ကို စက်ဘီးနဲ့ နံပြား သွားဝယ်ခိုင်းမလို့ ။ ပွင့်လန်းအတွက်ပေါ့ ။ ပွင့်လန်းက နံပြားနဲ့ ပဲပြုတ် စားချင်တယ်ဆိုလို့ မန္တလေးက ပဲပြုတ်ကြော်လို ဒေါ်နန်းဖေါင်း . .စပါယ်ရှယ် လုပ်ပေးလေ့ရှိသည် ။ နော်ထီးမူသည် မင်းလတ်တို့နေတဲ့တန်းလျားဆီကို ထွက်ခဲ့သည် ။
မင်းလတ်သည် အခန်းလေးခန်းရှိသည်အနက် အစွန်ဆုံးက အခန်းငယ်လေးမှာနေသည် .။ ထီးမူသည် မင်းလတ်ကို နှိုးဖို့ သူ့အခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည် ။ မင်းလတ်သည် သူ့ကုတင်လေးမှာ ပက်လက်ကြီး အိပ်ပျော်နေသည် ။ ဟယ် စောင်တခြား လူတခြား ဖြစ်နေသည် ..။ သူ့ခါးက ပုဆိုးသည် သူ့လည်ပင်းမှာ ရောက်နေသည် ။ ထီးမူတကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲထသွားသည် ။ အို . မင်းလတ်ရဲ့ လက်နက်ကြီးသည် သူမနဲ့သိပ်မဝေးလှ လက်တကမ်းအကွာမှာ မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေသည် ။ ထီးမူသည် ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့လီးကို ယခုလို အနီးကပ် တခါမှ မတွေ့ဘူးခဲ့ ။ တွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲ သူတိတ်တခိုး သဘောကျနေသော မင်းလတ်ရဲ့လီး ဖြစ်နေသည် ။ မင်းလတ်မှာဒီလို ကြီးမားတုတ်ခိုင်ပြီး ရှည်လျားတဲ့ဟာကြီးရှိမယ်လို့ ထီးမူထင်မထားမိခဲ့ ။ ဘုရားဘုရား ဒီလိုဟာကြီးနဲ့ ဘယ်လိုများ စောက်ပတ်လေးထဲ ထိုးသလဲမသိဘူး . နဲတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး . . . မင်းလတ်ကို နှိုးဖို့ လာခဲ့တဲ့ထီးမူ မနှိုးဘဲ ရပ်ကြည့်နေမိသည် ။ မင်းလတ် အိပ်မောကျနေသည် ။ ညက မမပွင့်ကို ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့သည် ။ ပထမဆုံးမမပွင့်ကို သူဘာဂျာကိုင်ခွင့်ရတာ ။ မမပွင့်ပါးစပ်ထဲမှာ သူပြီးသွားခဲ့သည် ။ မမပွင့်က သုတ်တွေကို မြိုချသည် ။ မမပွင့်လဲ ပြီးသွားစည်လို့ သူသိသည် ။ မမပွင့်နဲ့ သူဖက်ပြီး အိပ်နေပြီး ခနကြာတော့ သူ့ဒုတ်ကြီးပြန်မာလာပြန်သည် ။ မမပွင့်က
လို့မေးပြီး သူက ဘာမှပြန်မဖြေခင် မမပွင့်သည် သူ့ဒုတ်ကို ဒုတိယအကြိမ် စုတ်ပေးနေပါပြီ ။ ဒီတခါတော့ သူသည် ပြီးသည်အထိ မမပွင့်ကို မစုတ်စေပါ ။ မမပွင့်ရဲ့ဖေါင်းအိမို့မောက်တဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို သူလိုးဖြစ်အောင် လိုးရမှာကြောင့်ပါ ။ မမပွင့်ရဲ့အောင်မြင်လှပတဲ့ နို့တွေကိုလဲ သူကိုင်ခွင့်စို့ခွင့် ရခဲ့သည် ။ သူသည် မင်းလတ်ဆိုတဲ့ နံမည်ကို ဖိုးကံကောင်းလို့ ပြောင်းရတော့မည် ။ သူသည် ဝမ်းသာလုံးဆို့နေသည် ။ မမပွင့်ကို ဖွင့်ခွင့်ရလို့။
သူ့ထက် အစစရုပ်ကော ပညာကော ရာထူးအဆင့်ကော သာသည့် မမပွင့်ကို တအားကြိုက်နေတဲ့ မမပွင့်အဖေရဲ့ ပီအေ ရဲအုပ် စိုးသာ မမပွင့်အနားကပ်ခွင့်မရှိတဲ့အချိန်မှာ သူသည် မမပွင့်ကို ဖွင့်တဲ့ လူဖြစ်ရလို့ပါဘဲ ။ ရဲအုပ်စိုးသာ ကိုယ်တိုင်က အရာရှိကြီးတယောက်ရဲ့ သားဖြစ်သည် ။ အလွန်ရှိုးများပြီး ဘဝင်မြင့် မောက်မာသူပါဘဲ ။ ရဲအုပ်စိုးသာသည် မမပွင့်အဖေရဲ့ ပီအေလို့ ဆိုပေမဲ့ မမပွင့်ဆီမှာ အခစားဝင်နေတာက ပိုများသည် ။ ရဲအုပ်စိုးသာသည် မင်းလတ်ကို မမပွင့် အရေးပေးတာကို မကြိုက် ။ မင်းလတ်ကို မမပွင့်တို့အိမ်မှာစောင့်တဲ့ တာဝန်ကနေ မူရင်း ရဲအရံတပ်ရင်းကို ပြန်ပို့ဖို့ သူကြိုးစားသေးသည် ။ မမပွင့်ရဲ့အမေက မင်းလတ်က ဖင်ပေါ့ပြီး ခိုင်းလို့ကောင်းလို့ မင်းလတ်ကို အိမ်မှာဘဲထားလို့ တချက်လွှတ် အမိန့်ထုတ်လိုက်လို့ ရဲအုပ်စိုးသာ ငြိမ်နေရတာ ။ မင်းလတ်သည် ညက မမပွင့်နဲ့ သုတ် ၃ ကြိမ် လွှတ်ထားတာမို့ ရေရေလည်လည် အိပ်မောကျနေသည် ။ ညက မမပွင့်ရဲ့ အပျိုစင်ပန်းကို ရခဲ့တာဖြစ်သည် ။ မမပွင့်သည် သူ့ကို ရက်ရက်ရောရော ပေးခဲ့သည် ။ သူသည် မမပွင့်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်သည် ။ သူ့ကုတင်ဘေးက ချွတ်ကနဲ အသံကြားလို့ ဂျူတီစောင့်ဖို့ သူ့ရောင်းရင်း . .တယောက်ယောက် လာတာလားဆိုပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမတယောက် သူ့နားမှာရပ်နေတာ တွေ့လိုက်သည်။ မမပွင့်လား ။ အိုး . .နော်ထီးမူပါလား ။ နော်ထီးမူသည် သူ့မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးကို စိုက်ကြည့်နေသည် .။ သူသည် ဝုန်းကနဲ စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာသည် ။ ထီးမူသည် သူ့ကို ပြီတီတီနဲ့ ညုတုတုနဲ့လုပ်နေတာ ကြာပြီ ….။ သူ့ကို ညတုံးကတောင် ညုတုတုနဲ့ ။ ရုတ်တရက် ထီးမူလက်ကလေးကို ဖမ်းဆုတ်ကိုင်ကာ သူ့ ဆီကို ဆွဲယူလိုက်သည် ။
“အမေ့ . အို အကိုမင်းလတ် . ”
ထီးမူ ကုတင်ပေါ်ကို လဲကျလာသည် ။ မင်းလတ်သည် သူကရင်ခွင်ထဲကို အိအိထွေးထွေးလေး ကျလာသော ထီးမူရဲ့ ပါးပြင်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည် ။ ထီးမူရဲ့ပေါင်တန်တွေကလဲ ထောင်နေသော မင်းလတ်ရဲ့ဒုတ်ကြီးပေါ် ဖိမိနေပြီ ။
“အီးဘာဘာလုပ်တာလဲ . . .လွှတ်ပါအကို့ . . .”
“ထီးမူ . .နင့်ကိုငါ ချစ်တယ်ဟာ အရမ်းချစ်တယ် . .”
မင်းလတ်က ထီးမူရဲ့နှုတ်ခမ်း ထူထူအိအိ လေးတွေကို ပြွတ်ကနဲ စုတ်လိုက်သည် ။ ထီးမူရဲ့ ဆွယ်တာအင်္ကင်္ျီလေးကတော့ ကြယ်သီး ထပ်မထားလို့ ဘေးတဖက်တခက်ကို ပွင့်ကျနေသည် ။ အထဲက ရင်စေ့ဘလောက်စ်လေးရဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးတွေကို မင်းလတ်တထောက်ထောက်နဲ့ ဆွဲဖွင့်ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ အတွင်းခံ ဘာမှ ခံဝတ်မထားတာကြောင့် ထီးမူရဲ့ဝင်းဝါတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရသည် ။
“အို အကိုမင်းလတ် .”
မင်းလတ် နို့တွေကို မျက်နှာအပ်ခါသူ့ နှခေါင်းကြီးနဲ့ နမ်းရှုံ့လေသည် ။
“နင်ငါ့ကို ချစ်နေပါတယ် . .ဟုတ်တယ်မှုတ်လား . . .ချစ်တယ် မဟုတ်လား ”
“အိုဟိုဟို . သိဘူး . .”
မင်းလတ်က စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးနီနီလေးကို ဖမ်းဟတ်ခါ စို့လိုက်သည် .။
သူ့လက်တဖက်က ထီးမူရဲ့ ထမိန်အနွမ်းလေးကို မတင်လှန်လိုက်သည် ။
မင်းလတ် ပေါင်တန်တွေက ဖျတ်ကနဲ ထီးမူရဲ့ အဝတ်မဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတွေကို ဘေးကိုတွန်းခွဲလိုက်ပြီး မင်းလတ်ပေါင်ကြားက ဒုတ်ကြီးက အိကနဲထီးမူပေါင်ကြားကို ထောက်မိနေပြီ . ။ ထီးမူ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားသည် ။
“အို . .သူ့ဟာကြီး …ငါ့ဟာအပေါက်ဝမှာ တေ့ထားနေမိပြီ တော်တော်လက်မြန်တဲ့အကို . ”
မင်းလတ်က ဆတ်ကနဲ ညှောင့်လိုက်သည် ။ သူ့ဒုတ်ကြီးက ထီးမူ အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်ဆွဲသွားသည် ။ အိကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ထီးမူစောက်စိကို မိမိရရထိပွတ်သွားလို့ပါဘဲ . ။
“အကိုအကိုမလုပ်ပါနဲ့ . .သူတို့ ထီးမူကြာနေရင် လိုက်လာနေမှာ . .”
မင်းလတ်သည် ထီးမူရဲ့ ပေါင်ကြားကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည် ။ ထီးမူစောက်ဖုတ်ကြီးသည် မမပွင့်စောက်ဖုတ်ကြီးလိုဘဲ ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ။ မို့ဖေါင်းခုံးထနေသည် .။ ကုန်းယက်ချင်စရာကြီး . ။ မင်းလတ်လဲ ထီးမူနို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းကာ တလုံးပြီးတလုံး စို့ပြန်သည် .။ ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ကို အောက်ဘက်လျောဆင်းကာ ထီးမူ ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းထိုးကာ မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းပြီးခုံးထနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ပါတော့သည် ။
“အာအာ.အကိုရယ် . အာ . .ဟင့် . “
“. .အကိုအကိုရယ် . . .သိပ်ကဲတာဘဲ ထီးမူ အဖုတ်ကို သူ …. ဖမ်းယက်ပစ်တယ် အို.အိုအကို. .ရယ် . အာပါ”
မင်းလတ်သည် ထီးမူကို လုပ်ချင်နေတာကြာပြီ . .ထီးမူရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို သူကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွခဲ့ရတာ ကြာပြီ ။ စောက်ပတ်ကို ယက်နေရာက ထီးမူကိုပေါင်ကနေဆွဲကိုင်ကာ ဆွဲမှောက်လိုက်သည် ။ထီးမူ မှောက်ရက်ဖြစ်သွားတော့ သူမရဲ့ ဖင်တုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေက တပ်မက်စရာ တတုံးတခဲကြီးတွေ မြင်တွေ့နေရသည် ။ မင်းလတ်လဲ ထီးမူဖင်ကြီးတွေကို နမ်းရှုံ့ပြန် သည် .။
“အို . .အကိုအကို ဖင်ပေါက်ကို ယက်နေပြန်ပြီ . မရွံဘူးလား အကိုရယ် ဟင့်ထီးမူတော့ ရူးရတော့မယ် . ဟာ”
ဖင်တွေကို ဖြဲပြီး ကိုယက်နေတာ …ထိုအခိုက် . .ဒေါ်နန်းဖေါင်းရဲ့ အော်ခေါ်သံကို ထီးမူရော မင်းလတ်ပါ ကြားလိုက်ရလေသည် ။
“ထီးမူ.ထီးမူ …ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ . . ထီးမူး”
“ဟာ.. ခေါ်နေပြီထီးမူကို ခေါ်နေပြီ . . ”
ထီးမူ အမြန်ထကာ အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ပြီး မင်းလတ်အခန်းက ထွက်ပြေးသွားသည်. ။ မင်းလတ်သည် လီးကြီး မတ်မတ်တောင်ပြီး ကျန်ခဲ့သည် ။ တောက် . ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်း . . ။ မင်းလတ် ယူနီဖေါင်းနဲ့ တန်ဆာပလာတွေ တပ်ဆင်ဝတ်စားအပြီး ညွန့်သောင်း ရောက်လာသည် .။
“ဟဲဟိုးမှာ အဖိုးကြီးကို သွားကြိုရမယ်တဲ့ . .ထုံးစံအတိုင်း . .တပ်ရင်းကကောင်တွေလဲ အက်စကော့တစီးပါမယ် . .ဆရာစိုးသာ လဲ ရောက်နေပြီ ”
“ငါက ဟဲဟိုး လိုက်ရမှာလား အိမ်စောင့်ရမှာလား ”
” မင်း လိုက်သွားရမှာပေါ့ . .”
“အန်တီကြီး ဈေးဝယ်ရင် မင်းက ခြင်းဆွဲလိုက်ရမှာ ”
” မမပွင့်ရော ဟဲဟိုးလိုက်မှာလား . ”
” ဒါပေါ့ . .အဖိုးကြီးကို ကြိုပြီးရင် ရွှေညောင်က သူတို့အသိ တပ်မှူးဆီ ဝင်အုံ့းမှာလေ ”
ညွန့်သောင်းလက်ထဲက အမ်၁၆ သေနတ်ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး မင်းလတ်အိမ်ဘေးမှပတ်ကြီး အိမ်ရှေ့ကို လျောက်ခဲ့သည် ။ အိမ်ကြီးရှေ့မှာ ကားတွေတန်းစီထားသည်။ ရှေ့ဆုံးက အပြာရောင် မာဇဒါဂျစ် ပြီးတော့ အန်တီမြနဲ့ မမပွင့်တို့စီးမဲ့ မာဇဒါဆလွန်း . .အဲဒီနောက်က လင်းရိုဘာ ငါးချိတ်အပြာရောင်ကြီးနဲ့ ရဲတပ်သားတွေအပြည့် .။ မင်းလတ်က ရှေ့ဆုံးက မာဇဒါဂျစ်ရဲ့ အနောက်ခန်းမှာ တက်လိုက်သည် ။ ကားပေါ်မှာ သူ့ရောင်းရင်း ရဲသားတွေ ရောက်နှင့်နေပြီ .။ အားလုံး ပုဝါလည်စီး အနီများနဲ့ ။ ဟဲဟိုးလေဆိပ် .။ မမပွင့်အဖေပါလာမဲ့လေယာဉ် ဆင်းအလာကို သူတို့စောင့်နေကြသည် . ။ မင်းလတ်တို့က မလှမ်းမကမ်းမှာ နေရာယူထားကြသည် .။ ရဲအုပ်စိုးသာသည် ခါးမှာ သားရေအညိုရောင်အိတ်နဲ့ ပွိုင့် ၃၈ ပြောင်းတိုလေးကို ချိတ်ဆွဲထားပြီး လက်ထဲမှာ လမ်းလျောက်စကားပြောစက်တလုံးနဲ့ မမပွင့်အနားမှာ ပြုံးပြီးရှိနေသည် ။
အန်တီမြက ဟဲဟိုးကွင်းက နံမည်ကြီး အာလူးကြော် လိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ရဲအုပ်စိုးသာက ပြာပြာသလဲ. .အထုပ်တွေ ၁၀၀ လောက် ဝယ်သည် ။ ရွှေညောင်ရဲစခန်းက ရဲများလဲ ရောက်နေသည် .။ အန်တီမြကို လိုတာလုပ်ပေးဖို့ အားလုံးပြာပြာသလဲ ဖြစ်နေကြသည် .။ ရဲအုပ်စိုးသာက အာလူးကြော်ထုပ်တွေကို လာသယ်ဖို့ မင်းလတ်ကို လှမ်းခေါ်သည် ။ မမပွင့်မင်းလတ်ကို တွေ့သွားပြီ။ မမပွင့်ပြုံးပြီး သူ့ကို ကြည့်နေသည် ။ မမပွင့်က သိပ်လှနေသည် .။ ရဲအုပ်စိုးသာသည် မနေ့ညက မမပွင့်ကို ဖွင့်သွားတဲ့ကောင်ဟာ သူဆိုတာသာ သိရင် ဘယ်လိုနေမလဲ . . .မင်းလတ် တွေးနေသည် ။ မမပွင့်အနားမှာရှိနေတဲ့ ရဲအုပ်စိုးသာသည် လေဆိပ်မှ ရဲတချို့နဲ့ စကားကောင်းနေခိုက် မမပွင့်က မင်းလတ် “ခဏ” လို့ လှမ်းခေါ်သည် ။
” မမပွင့် ကုတ်အင်္ကျီကားပေါ် သွားထားပေးမလားဟင် မနက်ကတော့ ကုတ်လိုသလိုဘဲ . .ခုတော့ နေမြင့်လို့ ပူလာပြီး မလိုတော့သလိုဘဲ”
မမပွင့် မင်းလတ်ကို ကုတ်လှမ်းပေးလိုက်သည် ။ အို . .ကုတ်အောက်မှာ စာခေါက်လေး.။ မမပွင့်က တိုးတိုးလေး . . “စာဖတ်ကြည့် … “တဲ့ . . ။
မင်းလတ် မမပွင့် ကုတ်အင်္ကျီကို ကားထဲ သွားပို့အပြီး.သူ့ရောင်းရင်းရဲဘော်တွေကို သူအိမ်သာခဏသွားမယ်လို့ ပြောပြီး အိမ်သာထဲဝင်ကာ မမပွင့် စာလေးကို ဖတ်သည် .။ မမပွင့်ရဲ့စာက …
‘မောင် . .မမ မောင်ချစ်တာတွေ အရမ်းကြိုက်တာဘဲ ။ မမ မနက်ရောက်တော့ မောင့်ကိုလွမ်းနေတယ် ။ မမ ထပ်ပြီးလိုချင်နေပြီကွာ . .မမကို မောင်ထပ်ပြီး နမ်းပေးအုံး ချစ်ပေးအုံး မောင့်ကိုလဲ အနမ်းတွေထပ်ပေးမယ် . .မောင့်ရဲ့ ဘတ်ဘတ်ကြီးကို မမ လွမ်းနေတယ် . .မကြာခင် တွေ့ကြမယ်နော် . .’
ချစ်မမ … မမပွင့်စာကိုဖတ်ပြီး မင်းလတ်လီးကြီး မာကျောတောင်မတ်လာသည် ။ အိမ်သာထဲ သူ့လီးတန်ကြီးကို လက်နဲ့ဆုတ်ကိုင်ထားမိရသည် ။ မမပွင့်ရေးတဲ့ ဘတ်ဘတ်ကြီးဆိုတာက မင်းလတ်ရဲ့လီးကြီးနဲ့ ဂွေးစိနှစ်လုံးကို မမပွင့်က နံမည်ပေးထားတာပါ ။ မမပွင့်ကို သူဖွင့်တဲ့အချိန် သူ့ ဂွေးစိတွေက မမပွင့်ဖင်တွေကြားကို ဘတ်ကနဲ ဘတ်ကနဲ စီးချက်မှန်မှန် ရိုက်ခတ်ကြတာကို မမပွင့်က သဘောကျပြီး . .သူ့ဘတ်ဘတ်ကြီးလို့ နံမည်ပေးထားတာပါ.။ တော်တော်နဲ့ မမပွင့်နဲ့ မင်းလတ် မတွေ့နိုင်ကြပါဘူး ။ အိမ်မှာလဲ လူမလစ်လို့ ထပ်မတွေ့နိုင်ကြဘူး ။ ဒါပေမဲ့ မမပွင့်က အရမ်း မင်းလတ်နဲ့ ထပ်တွေ့ချင်နေတော့ ကြံဖန်ပါတော့သည်။
မင်းလတ်ရဲ့အလုပ်နားရက် အပြင်လည်ခွင့် ရတဲ့နေ့မှာ မမပွင့်က ဝါးပြားရပ်ကွက်တနေရာက သူ့သူငယ်ချင်း နန်းခမ်းစံရဲ့အိမ်ကို အိမ်ကကားကို လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး ညနေမှ ပြန်ကြိုဖို့ ပြောသည် .။ မင်းလတ်က နန်းခမ်းစံတို့အိမ်ကို လိုက်သွားသည် ။ နန်းခမ်းစံတို့မိဘတွေက ရန်ကုန်သွားနေကြလို့ နန်းခမ်းစံနဲ့ သူ့အဒေါ်ဘဲ ရှိနေသည် ။ မမပွင့်နဲ့ သူနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့နိုင်ကြဖို့ နန်းခမ်းစံက သူမအဒေါ်နဲ့ . . ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပေးသည် ။ ရှောင်ပေးသည် .။ သူတို့နှစ်ယောက် အငမ်းမရ နမ်းကြသည် ။ မတွေ့ကြတာကြာပြီး . .လွမ်းလွန်းနေတာကြောင့် မမပွင့်ရော မင်းလတ်ပါ အဝတ်အစားတွေတောင် မချွတ်အားဘဲ မမပွင့်ထမိန်ကိုလှန်ကာ မမပွင့်ကို ဆိုဖါပေါ်မှာ ပေါင်ကားစေပြီး မင်းလတ် မမပွင့်ကို ဘာဂျာကိုင်လေသည် ။ မမပွင့်သည် သူ့ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုတ်ကိုင်ကာ အော်ညည်းသည် ။ တပြတ်ပြတ်တပြွတ်ပြွတ် အသံတွေထွက်နေသည် .။ အရင်က ခပ်ရေးရေးပေါက်နေသော မမပွင့်စောက်မွှေးတွေ အခု လုံးဝပြောင်နေသည် ။ မမပွင့် ရိပ်လိုက်လား နုတ်လိုက်သလားတော့ မသိ ။ မမပွင့်ရဲ့ ဖင်အောက်ကို လက်လျိုပြီး ဖင်တွေကို သူ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဖိဖိယက်တာ ။
“အာဟာ . အာအာအာ မောင်ရယ် . အို . .မမပွင့်မမပွင့်. .အာဟာဟာ.အိုအို”
မမပွင့် လူးလန်ကော့နေသည် .။
“တော်..တော်..တော်ပြီ..မောင့်ဟာကြိးကို ပေးအုံး . .မမပွင့် စုတ်ချင်တယ်”
မမပွင့်သည် သူ့ဒုတ်ကြီးကို အငမ်းမရဘဲ စုတ်ပါတော့သည် ။ ပါးစပ်ကလဲ တတွတ်တွတ်.နဲ့ .
“လွမ်းလိုက်ရတာ ဘတ်ဘတ်ကြီးရယ် လီးကြီးရယ်”
ဆိုပြီးလျာနဲ့ ယက်လိုက်စုတ်လိုက်နဲ့ မင်းလတ်လဲ မမပွင့်လျာထိပ်နဲ့ သူ့လီးရဲ့ထိပ်ကအပေါက်ကို ထိုးကလိလိုက်တိုင်း . .မမပွင့် ပါးစပ်ထဲ သူ့လီးကြီးကို ထိုးထိုးညှောင့်မိရသည်. .။
“အာ.အာ. ကောင်း.ကောင်းလိုက်တာဗျာ . .”
မမပွင့်ပါးစပ်ထဲ ပြီးသွားမှာစိုးလို့ သူ သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်ရသည် ။
“ဘာလို့ထုတ်ချင်တာလဲကွာ . .မမပွင့် စုတ်တာ မကောင်းလို့လား . “
“မဟုတ်ဘူး . .အရမ်းကောင်းတယ် .မမပွင့်ကို အပီအပြင် လိုးချင်နေလို့ “
မမပွင့်က သူကလိုးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုက်တာကို သဘောကျသွားပြီး . .
“လိုးလိုး. .မမပွင့်ကို မင်းလေး အားရအောင် လိုးစမ်းပါကွာ”
လို့ ပြုံးပြုံးလေး ပြောလိုက်ပါ သည် .။ မင်းလတ်ရော မမပွင့်ရော အဝတ်အစားတွေ အားလုံးကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ လိုးကြတော့သည် ။ မမပွင့်သည် သူ အင်တာနက် မှာ တွေ့ဖူးထားတဲ့ မိန်းမ အပေါ်ကတက် တဲ့ ပုံစံကိုစမ်းလိုပြီး မင်းလတ် ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်လိုက်ပြီး မင်းလတ်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကို သူမလက်ကလေးနဲ့ ဆွဲယူကာ သူမစောက်ဖုတ်အပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်သည် .။ ဖြေဖြေးထိန်းပြီးထိုင်ချ မမ စိုအိအိ မမပွင့်စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းများကြား သူ့လီးကြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ညပ်နေပြီး . .ဗျစ်ဗျစ် ဗျိ . .ဆိုပြီး မမပွင့်စောက်ခေါင်းထဲ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီး မြုပ်ဝင်သွားပြီ ။ မမပွင့် လဲ …. အို . .အာအာ ဆိုပြီး ညည်းရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ကြွလိုက်ဖိလိုက်နဲ့ အပေါ်က တက်လိုးနေပါပြီ ။
“ ကောင်းတယ် အိုအရမ်းကောင်းတယ် .ဟင်း . .ကောင်းတာ အရမ်း “
မမပွင့်လုပ်ဖူးအောင် ပေးလုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ မင်းလတ်သည် မမပွင့်အပေါ်ကနေတာကို အားမရပါ ။ မမပွင့်ကို ဖင်ပူးတောင်းထောင် ကုန်းခိုင်းပြီး သူအနောက်မှ အားရပါးရ ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးလေသည် .။
“ လိုးလိုး . လိုးပေးဆောင့်ပေး တအားတအားဆောင့် “
လီးကြီးဟာ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေပြီ ။ ဖွတ်ကနဲ ဖပ်ကနဲ အသံတွေ ဆူညံနေသည် ။အင်းအင်းနဲ့ ညည်းသံ အားယူသံတွေ . .ကြားနေရသည် .။ တအားဆောင့်နေတုံး မမပွင့်ကလဲ အောက်မှ တအားပြန်ကော့ကော့ပေးနေသည် ။ အားနဲ့ မာန်နဲ့ .လိုးဆောင့်နေတဲ့အချိန် မမပွင့်က
“ မြန်မြန် မြန်မြန် . .ဆောင့်တအားဆောင့်ဆောင့် “
နဲ့အော်ရင်း သူလဲ အောက်မှ ဒလစပ် ပြန်ပင့်ပေးနေရင်း နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူလို ကာမအထွပ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားကြပါတော့သည် … ။